Sabuurka - cilaaqaadka lala yeesho Ilaah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Luqad kale- Jarmalka- Ingiriis- Talyaani- Française- Español- Português- Nederlandays- Deenish- Finnish- Af Iswiidhish- Noorwiijiga- Polish- Bulgarian- Ruush- Catalan- Basque- Irish- Welsh- Icelandic- Giriig- Scottish Gaelic- Turkiga- Slovenian- Yukreeniyaan- Roomaaniya- Armeniyaan- Azerbaijani- Lithuaniyan- Belarusian- Estoniyan- Joorijiyaan- Hangari- Galician- Boosniyaan- Makedoniya- Albaaniyaan- Slovak- Czech- Croatian- Corsican- Kurdiyiinta (Kurmanji)- Latin- Esperanto- Cibraaniga- Faaris- Carabi- Jabaaniyaan- Kuuriyaan- Shiine (Dhaqan ahaan)- Filibiin- Indonesian- Latvia- Fiyatnaamiis- Malta- Thai- Hindi- Afrikaans- Malays- Sawaaxili- Haitian Creole- Bengali- Javanese- Khmer- Lao- Maori- Marathi- Mongolian- Nepali- Punjabi- Soomaali- Taamil- Kazakh- Malagasy- Hawaiian- Kyrgyz
Xiriirka Ilaah ee uu la leeyahay dadkiisa Sabuurrada
In kasta oo ay jiraan qaar ka mid ah sabuurro laxiriira taariikhda dadka Eebbe, Sabuurrada badankood waxay sharxaan xiriirka shaqsiga ee Ilaah. Mid ka mid ah ayaa u qaadan kara in gabaygu uu quseeyo oo keliya qoraaga oo uusan daruuri u ahayn ballanqaad kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, Sabuurka ayaa lagu soo daray buugga qadiimiga ah ee reer binu Israa'iil si ay noogu martiqaadaan ka qeybqaadashada cilaaqaad sida lagu sharaxay heesahan. Waxay muujinayaan in Ilaah u dadaalayay kaliya maahan xiriirka dadka oo dhan, laakiin sidoo kale shaqsiga ku dhex jira. Qof walba wuu ka qeyb qaadan karaa.
Cabasho halkii aad ka fahmi lahayd
Heesta ayaa loo yaqaanay maxaa yeelay heesaha ayaa inta badan la heesi jiray. Xitaa kuwa aan shaqsiyan saameeyn waxaa laga codsaday inay ku biiraan baroorta. Waxaa laga yaabaa inaad xusuusiso inay jiraan kuwa ka mid ah dadka Ilaahay oo runtii aad u xun. Waxay filayeen inuu Ilaahay soo faragaliyo laakiin ma aysan ogeyn goorta ay tani dhici doonto. Tani waxay sidoo kale sharraxaysaa xidhiidhka aan la leenahay Ilaah maanta. In kasta oo Ilaah si firfircoon uu faragalinta ugu galay Ciise Masiix si uu uga adkaado cadaawayaasheena ugu xun (dembiga iyo dhimashada), Had iyo jeer isagu ma daryeelo dhibaatooyinka jirkeenna sida ugu dhakhsaha badan ee aan jeclaan lahayn. Baroorashadu waxay ina xusuusineysaa inay dhibaatooyinku socon karaan waqti dheer. Markaa waxaan sii wadnaa inaan eegno Ilaah oo aan rajeynno inuu isagu dhibaatada xallin doono.
Waxaa jira xitaa sabuurro ku dacwaynaya Ilaah hurdada:
Fannaaniintu runtii ma qiyaasi jirin in Ilaah ku dhacay hurdada gadaal. Erayada looma jeedo inay noqdaan kuwo matalaya xaqiiqda. Waxay doorbidaan inay sharaxaan xaalada shucuurta shaqsiyadeed - markan xaalada waa jahwareerka. Buugga xusuus-qorka qaranku wuxuu dadka ku casuumay inay bartaan gabaygan si ay u muujiyaan qoto-dheer dareenkooda. Xitaa haddii aysan ka soo horjeedin cadawga lagu sharaxay sabuuradda xilligan la joogo, maalinta ayaa imaan karta goorta ay tani dhici karto. Sidaa darteed gabaygan Eebbe ayaa looga baryey ciqaab: "Ku ceeboobi oo ha ceeboobi, kulli kuwa ku reyreeya masiibadayda;
Sabuurka ayaa ka buuxa luuqad shucuureed. Tani waa inay nagu dhiirrigeliso inaan muujino dareenkeenna qoto-dheer ee xiriirka aan la leenahay Ilaah oo dhibaatooyinka aan gacanta ugu dhigno.
Sabuurro mahad leh
Waxay u ekaan kartaa inuu qoruhu Ilaah u beddelayo: Haddii aad i caawiso waan ku ammaanayaa. Laakiin xaqiiqdii qofku hore ayuu u amaanayaa Ilaah. Codsiga caawimaadda ayaa ah aqbalaadda la muujiyey ee ah in Ilaah fulin karo codsiga. Dadku waxay durba ka sugayeen isaga inuu soo dhexgalo haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah oo ay rajeynayaan inay awoodaan inay mar kale isu soo urursadaan adeegyada maalmaha ciidaha soo socda si ay ugu mahadceliyaan oo u ammaanaan. Waxay sidoo kale si fiican u yaqaanaan heesahooda. Xitaa murugada murugada weyn leh waxaa laga codsanayaa inay bartaan heesaha mahadnaqa iyo ammaanta, waayo waxaa jiri doona waqtiyo nolosha mar kale, maadaama heesahan sidoo kale ay muujinayaan dareenkooda. Waxay na weydiisaneysaa inaan Ilaah ku ammaano, xitaa haddii ay shaqsi ahaanteena na dhaawacayso, maxaa yeelay xubnaha kale ee bulshada ayaa la kulmi kara waqtiyo farxad leh. Xiriirka aan la leenahay Eebbe kaliya nama saameyneyso shaqsi ahaan - waxay ku saabsan tahay ka mid noqoshada dadka Ilaah. Markuu qofku faraxsan yahay, kulligeen waan faraxsan nahay; Markay hal qof xanuunsadaan, dhammaanteen way dhibaataysan yihiin. Sabuurrada murugada iyo sabuullada farxadda ayaa iyaguna annagaba muhiim noo ah. Xitaa haddii aan ku raaxeysan karno barakeysanno badan, waxaan ka cabannaa in Masiixiyiin badan loo silciyo caqiidadooda. Iyaguna sidoo kale waxay ku heesaan heeso farxad ah, iyagoo kalsooni ku qaba inay arki doonaan maalmo ka wanaagsan mustaqbalka.
Mar labaad David wuxuu adeegsanayaa magacyo la buunbuuniyay oo ah kalmadaha si uu u xoojiyo wax Waqti kasta oo nalaga badbaadiyo xaalad deg-deg ah - ha ahaato mid sababay carqaladeyn, deris, xayawaan ama abaar - waxaan uga mahadcelineynaa oo ku amaaneynaa Ilaah caawimaadda uu ina siiyo.
Dadka Ilaahay waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ku daraan dareennadaas qayb ka mid ah xiriirkooda ay la leeyihiin Ilaah: dareenka baqdinta, qadarinta, iyo amniga. Dareenkan xagga amniga ah miyay had iyo jeer ku dhex jiraan dadka Ilaah? Maya, baroorayaashu waxay ina xusuusinayaan inaan taxaddar lahayn. Waxa la yaabka leh ee ku saabsan Buugga Sabuurrada ayaa ah in dhammaan noocyada kala duwan ee Sabuurrada la isku dhafo. Mahad, mahad iyo cabasho ayaa isku xidhan; taasi waxay ka tarjumaysaa xaqiiqada ah in dadka Eebbe ay la kulmayaan waxyaalahan oo dhan oo Eebbe wuu inala jiraa meel kasta oo aan tagno.
Sabuurka qaar ka mid ah waxay ku saabsan yihiin boqorrada dalka Yahuudah oo waxaa laga yaabaa in sanad kasta lagu heesto meelaha dadku isugu yimaado. Qaar ka mid ah sabuurradan ayaa qaarkood lagu tarjumay maanta Masiixa, maadaama dhammaan sabuurrada oo dhami ay ku wada rumoobeen Ciise. Qof ahaan, wuxuu soo maray - sida anaga - walwal, cabsi, dareemo in la dayacay, laakiin sidoo kale iimaanka, ammaanta iyo farxadda. Waxaan isaga ugu mahadnaqayaa sidii boqorkeenna oo ah kii Ilaah Badbaadiyaheenna inoo keenay. Sabuurka ayaa sababay mala awaalkeena. Waxay nagu xoojinayaan cilaaqaadkayaga aan la leenahay Rabbiga sida xubnaha dadka Ilaah.